Global Voices teny Malagasy · 3 Febroary 2019
03 Febroary 2019
Tantara tamin'ny 03 Febroary 2019
Egypta: Bilaogera nodarohan'ny polisy mafy
Ejipta03 Febroary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Oktobra 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Ny Zoma 16 Oktobra, ilay bilaogera Ejiptiana Demagh Mak sy ny rahalahiny dia nosakanana hanaovana fisavana “kara-panondro” tany Tanta (Faritany Ejiptiana) nataon'ny polisy iray antsoina hoe Mohamed El-Dahrawy. Tsy nisy antony anefa dia nodarohan'ilay polisy tao an-damosiny ilay bilaogera Mak...
Iran: Bilaogera iharan'ny fanenjehana nahazo ny loka Theodor Haecker
Iràna03 Febroary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Aprily 2011 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Nomena ny loka loka Theodor Haecker i Shiva Nazar-Ahari, mpikatroka mpiaro zon'olombelona Iraniana sady bilaogera.
Sri Lanka: ny Free Media sy ny Governemanta
Mediam-bahoaka03 Febroary 2019
Mitatitra ny famelezan'ny Minisitry ny Fiarovana ao Sri Lanka ny gazety tsy miankina ny Free Media.
“Ny tantaranay ny fahalalànay” na loharanombaovao feno avy amin'i Whose Knowledge?
Mitondra miaraka ireo fizaràna efatra navoaka teo aloha ny loharanom-baovao feno amin'ny "Ny tantaranay ny fahalalànay". Kendreny amin'izany ny fitarihana anao eo amin'ny lafiny fizarànao ny fahalalànao sy ny fananganana tambajotram-piraisankina mafy orina kokoa.
Shina: Manakana izay manova endrika ny Google
Shina03 Febroary 2019
Nakatona nandritra ny adiny roa tamin'ny alina lasa teo ny Google, ka anisan'izany ny fikarohana, gmail, antontan-taratasy sy fampiharana, na dia efa naverin'ny FAI sasany aza ny fahafahana miditra tao anatin'ny ora roa, nilaza ireo mpisera twitter sasany fa mbola voasakana any amin'ny faritra sasany ao Shina ny Google.